Nke a na peeji nke ga-chọpụta gị nchọgharị asụsụ 12 asụsụ na ngosi na na nwoke asụsụ.
Ọ bụrụ na asụsụ gị egosighi, pịa ebe a maka ihe English page na ike ga-sụgharịa nchọgharị gị.
2. Biko họrọ otu n'ime mkpọchi n'okpuru gị họọrọ coupon kwekọrọ na gị sistemụ.3. Biko nyochaa LC Tech ebighị Usoro Guide gị ntụziaka na-inweta ihe ebighị koodu eji gị RPRID Oghere Usoro ọgụgụ.
2. The button n'okpuru họrọ coupon、Biko họrọ dị ka gị sistemụ。3. Jiri RPRID Oghere Usoro ọgụgụ、Biko na-ebighị koodu。Olee otú iji na-enweta LC Tech ebighị Usoro Guide Biko lelee。
2. Biko họrọ button maka gị sistemụ. Nke a button na-emi odude n'okpuru họrọ zuo.3. Ịmụta otú na-enweta gị ebighị koodu site na gị Oghere Usoro ọgụgụ RPRID, nleta LC Tech ebighị Usoro Guide2. Họrọ otu nke ahọrọ coupon dị n'okpuru mkpọchi ịhọrọ gị sistemụ.3. Lea na LC Tech ebighị Usoro Guide maka ntụziaka iji nweta ihe ebighị koodu site ya Oghere Usoro ọgụgụ RPRID.2. Biko họrọ otu n'ime ndị buttons n'okpuru gị họrọ Kupọns, ndị gị sistemụ entsprichtt.3. Biko gụọ LC Tech ebighị usoro ntuziaka na soro ntuziaka, ihe ebighị koodu eji gị RPRIDzu natara Oghere Usoro ọgụgụ.2. Mee ka gị na nhọrọ site、Bọtịnụ n'okpuru dere na gị sistemụ kwekọrọ a họrọ。3. Mgbe na-eji gị Oghere Usoro ọgụgụ nweta ebighị koodu RPRID，Biko ahụ metụtara gị arụmọrụLC Tech ebighị Usoro Guide。 2. Họrọ otu nke mkpọchi n'okpuru họrọ Kupọns dabere na sistemụ ị na-eji.3. Banyere otú iji nweta ihe ebighị koodu eji gị Oghere Usoro ọgụgụ RPRID
LC Tech ebighị Usoro GuideBiko rụtụ aka na. 2. Pịa otu n'ime mkpọchi n'okpuru coupon ị họọrọ, na ọkụ gị sistemụ.3. biko rụtụ aka na LC Tech ebighị Usoro Guide maka ntụziaka banyere otú iji nweta ihe ebighị koodu na Oghere Usoro ọgụgụ RPRID.2. N'etiti mkpọchi na-egosi n'okpuru gị họrọ coupon, Họrọ button na kwekọrọ na gị sistemụ.3. Rụtụ aka na LC Tech ebighị Usoro Guide Iji hụ ntuziaka maka ebighị koodu Site na gị Oghere Usoro ọgụgụ RPRID.2. biko, n'okpuru họrọ coupon click, kwesịrị ekwesị ka gị na sistemụ.3. biko, biko gụọ LC Tech ebighị Usoro Guide maka ntụziaka banyere otú iji nweta ihe ebighị koodu eji a Oghere Usoro ọgụgụ RPRID.
2. Biko họrọ otu n'ime ndị buttons n'okpuru họrọ ndepụta ego na na-dakọtara na gị sistemụ.3. biko lelee LC Tech ebighị Usoro Guide N'ihi na ntụziaka na-na-ebighị na-eji gị Oghere Usoro ọgụgụ na-amalite na afo code RPRID.2. biko, họrọ otu n'ime mkpọchi n'okpuru gị họrọ coupon kwekọrọ na gị sistemụ.3. Biko nyochaa LC Tech ebighị Usoro Guide maka ya ntụziaka banyere otú inweta ebighị koodu eji gị Oghere Usoro ọgụgụ RPRID.2. Ị họọrọ coupon button n'okpuru iji họrọ otu na kwekọrọ na sistemụ arụmọrụ gị.3. Review LC Tech ebighị Usoro Guide Your ntụziaka inweta ebighị koodu eji gị RPRID Oghere Usoro ọgụgụ.
Ọ bụrụ na ị natara a coupon na gị SanDisk® maka a free 2 afọ ebighị nke RescuePRO Deluxe maka SSD, biko na-eso ntụziaka n'okpuru ibudata gị free 2 afọ ebighị Mee nke RescuePRO® Deluxe maka SSD software:
>>>>ndumodu: Gị dere ga-asị RescuePRO® Deluxe maka SSD.
Nke a software bụ maka SSD si (Solid State draịva).
N'ihi na flash media, dị ka SD kaadị, microSD kaadị, USB draịva, họrọ RescuePRO® Deluxe na n'elu peeji a.
2. Biko họrọ otu n'ime mkpọchi n'okpuru gị họọrọ coupon kwekọrọ na gị sistemụ.3. Biko nyochaa LC Tech ebighị Usoro Guide gị ntụziaka na-inweta ihe ebighị koodu eji gị RPSSD Oghere Usoro ọgụgụ.** Biko rụba ama: Should you have a coupon for RescuePro Deluxe for SSD with a serial number that begins with RPDLX-00602,
** Nke a bụ oke biri ebi coupon
Biko wụnye software na kọmputa, na mgbe ị na-agba ọsọ ya maka oge mbụ, you will then be prompted to activate your software. Ị ga-ahụ ga-nyere a njikọ ebighị page. Biko soro njikọ jupụta na ụdị, ijide n'aka na-agụnye gị Oghere Usoro ọgụgụ iji rụọ ọrụ gị free oyiri nke RescuePRO® software. Pịa ebe a maka a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu ebighị
Wụnye software na kọmputa gị、N'oge mbụ oji a kpaliri na-arụ ọrụ、A njikọ na ebighị page egosi。Biko tinye ozi ndị dị mkpa na ụdị dị na ọdịnaya nke njikọ。N'oge ahụ、Biko tinye RescuePRO® software serial koodu nke。
Nkọwa nke usoro ndenye(English)Biko pịa ebe a。
Ọ bụrụ na kọmputa na nke ị chọrọ iji wụnye software na-adịghị jikọọ na Ịntanetị、Biko rụtụ aka na arịrịọ nke ebighị na RescuePRO® support site e-mail。Anyị na-enye iche iche ihe ebighị koodu。
Biko wụnye software na kọmputa gị. Mgbe ị na-amalite ya na nke mbụ, Ị ga-jụrụ, Iji rụọ ọrụ gị software. Ị ga-ahụ na-enweta a njikọ ebighị page. Biko soro a njikọ ma dejupụta ụdị. Jide n'aka na-tinye Oghere Usoro ọgụgụ, rụọ ọrụ gị free oyiri nke RescuePRO®Software.
Pịa ebe a maka a nzọụkwụ-site-zoo ndu iji rụọ ọrụ.
Ọ bụrụ na kọmputa na-adịghị na jikọọ na wụnye software na Internet, Ị nwere ike izipu gị ebighị arịrịọ nọmba site e-mail na RescuePRO® support, otú anyị nwere ike inye gị na ihe ebighị koodu dị.
Ịkpọtụrụ anyị, biko họrọ otu n'ime mkpọchi n'okpuru dị ka sistemụ arụmọrụ gị na n'ihu na nwoke na kọntaktị. ma ọ bụ Nhọrọ, na-akpọ anyị na (US) ọnụ ọgụgụ free (866) 603-2195 n'okpuru ma ọ bụ na saịtị (727) 449-0891 ihe. Oku site na Europe +44 (0) 115 704 3306
Wụnye software na kọmputa gị, na mgbe ị na-agba ọsọ n'ihi na oge mbụ, ị ga-kpaliri ka rụọ ọrụ software. Ị ga-nyere a njikọ ebighị page. Soro njikọ na mezue ụdị, na-eme ka n'aka na-agụnye Oghere Usoro ọgụgụ iji rụọ ọrụ gị free oyiri nke software RescuePRO®.
Pịa ebe a maka a nzọụkwụ-site-zoo ndunke ebighị.
Ọ bụrụ na kọmputa na nke ị na-wụnye software na-adịghị jikọọ na Ịntanetị, i nwere ike n'okpuru gị ọnụ ọgụgụ nke RescuePRO® support ebighị arịrịọ, na anyị ga-enye gị ihe ebighị koodu.
kọntaktị, họrọ gị sistemụ site na ịpị bọtịnụ n'okpuru na dejupụta ụdị Kpọtụrụ anyị maka gị sistemụ. ma ọ bụ, Nhọrọ, telefonaci (US) akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọtụtụ (866) 603-2195, mpaghara (727) 449-0891. N'ihi na Europe na-akpọ +44 (0) 115 704 3306
biko, wụnye software na kọmputa gị na, Mgbe ị na-agba ọsọ ya maka oge mbụ, ị ga-kpaliri ka rụọ ọrụ software. Ị ga-ahụ na-enweta a njikọ ebighị page. biko, pịa na njikọ na dejupụta ụdị, Tinye Oghere Usoro ọgụgụ iji rụọ ọrụ a free oyiri nke usoro RescuePRO®. Pịa ebe a maka Walkthrough, ebighị usoro.
Ọ bụrụ na gị na kọmputa, na nke ị wụnye usoro, bụghị jikọọ na Ịntanetị, ị nwere ike izipu ihe e-mail ebighị arịrịọ nọmba na nkwado RescuePRO®, na anyị ga-ezitere gị rịọrọ ebighị koodu
Ịkpọtụrụ anyị, họrọ, biko, ya sistemụ site na ịpị kwesịrị ekwesị button n'okpuru na-aga ụdị ọgwụgwọ na-akwado gị sistemụ. I nwere ike na-akpọ anyị (ọnụ ọgụgụ-free n'ime US) (866) 603-2195, ma ọ bụ a local ndọtị (727) 449-0891. Nkwado maka a ọnụ ọgụgụ nke European ahịa +44 (0)115 704 3306
Biko wụnye software na kọmputa gị, na mgbe ọ na-agba ndị oge mbụ, ị ga-jụrụ iji rụọ ọrụ nke usoro ihe omume. Mgbe ahụ ị ga-nyere a njikọ ka a page ebighị. Biko soro njikọ na dejupụta ụdị, na na na-agụnye gị Oghere Usoro ọgụgụ iji rụọ ọrụ a free version nke usoro ihe omume RescuePRO®. Pịa ebe a iji nweta a plan-kwụpụ ebighị ndu
Ọ bụrụ na ngwaọrụ na ị na-wụnye ya jikọọ na Ịntanetị bụ, ị nwere ike izipu arịrịọ nọmba gị ebighị ka oru nkwado maka RescuePRO®, anyị nwere ike inye gị ebighị koodu.
Ịkpọtụrụ anyị, biko họrọ gị sistemụ si mkpọchi n'okpuru, na na-elu-ihe nlereanya “Kpọtụrụ Anyị” N'ihi na gị sistemụ. Ma ọ bụ Nhọrọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na ọnụ ọgụgụ-free nọmba na United States(866) 603-2195 Ma ọ bụ obodo oku.(727) 449-0891
Iji jikọọ si Europe: +44 (0)115 704 3306
Wụnye software na kọmputa gị na mgbe na-agba ọsọ ya maka oge mbụ, Ọ ga-ahụ ga zijere rụọ ọrụ gị software. Ị ga-ahụ ga-nyere a njikọ ebighị page. Soro njikọ ma jupụta na formuário, na-eme ka n'aka na-agụnye gị Oghere Usoro ọgụgụ iji rụọ ọrụ gị free oyiri nke software RescuePRO®.
Pịa ebe a maka a nzọụkwụ-site-zoo ndu nke ebighị.
Ọ bụrụ na kọmputa bụ ebe na-eme nwụnye na-adịghị jikọọ na internet, Ị nwere ike izipu gị ebighị arịrịọ nọmba maka RescuePRO® Nkwado na nwere ike inye gị na-ebighị Code
Ịkpọtụrụ anyị, họrọ gị ịkpa usoro si mkpọchi n'okpuru na gaba ụdị Kpọtụrụ maka gị sistemụ. ma ọ bụ, Nhọrọ, ekwentị anyị (USA), maka free nọmba (866) 603-2195 ma ọ bụ na mpaghara (727) 449-0891. N'ihi na Europe oku +44 (0)115 704 3306
Wụnye software na kọmputa, Na mgbe ị na-agba ọsọ ya maka oge mbụ, Ị ga-kpaliri iji rụọ ọrụ gị software. Mgbe ahụ ị ga-nyere a njikọ ebighị page. Soro njikọ na dejupụta ụdị, RescuePRO® gị free oyiri nke software, jide n'aka na-agụnye gị Oghere Usoro ọgụgụ iji rụọ ọrụ. Pịa n'ihi na a nzọụkwụ-site-zoo ndu nke ebighị on.
Na-arụnyere na kọmputa na-adịghị na jikọọ na Ịntanetị, N'ihi ya, i nwere ike ọgụgụ nke e-mail gị ebighị arịrịọ RescuePRO® support, Na anyị nwere ike inye gị na-ebighị koodu.
Anyị kpọtụrụ, Biko họrọ gị sistemụ si mkpọchi n'okpuru gaba na-etolite kpọtụrụ anyị maka sistemụ arụmọrụ gị. ma ọ bụ Nhọrọ, Biko ka anyị mara (US) Toll Free (866) 603-2195, ma ọ bụ na mpaghara (727) 449-0891 Kpọọ. Oku Europe +44 (0) 115 704 3306